China Industrial Gelatin orinasa sy mpanamboatra | Yasin
Inona no lakaoly gelatin / manafina teknika?
Industrial Gelatin ara-teknika dia proteinina iray azo avy amin'ny hydrolysis of collagen izay proteinina anisan'ny hoditra biby, collagen tissue. Izy io dia granule mavo maivana, lakaoly vita amin'ny granula tsara izay mora levona anaty rano. Ny akora ampiasaina amin'ny famokarana dia avy amin'ny hoditry ny biby na taolana. Indostrialy Gelatin dia matetika ampiasaina amin'ny fanaovana paintballs, fodder, taratasy vita amin'ny lamba malefaka tsara, lamba voadio, lakaoly mainty, fonosana vita amin'ny fingotra, karatra fametahana asa-tanana, fanaka vita amin'ny hazo, fambara lozisialy, hazavana amin'ny hoditra, afaka mandoko sy manaingo siezina, mandoto sy manisy plating ny ranon-javatra, mandrafitra ny gel fiakarana. Ny viscosity-ny dia tena zava-dehibe, ary na dia ny parameter ilaina indrindra aza.
Herin'ny Jelly Bloom 50-250Bloom
Heavy Mental mg / kilao ≤50
Tabilao mikoriana ho an'ny gelatin indostrialy
• GELATIN INDUSTRIAL dia voamaina mavo, volontsôkôla na volontsôkôlà somary mavo, izay afaka mandalo ny sivana 4mm aperture.
• Izy io dia hoditra mamontsina, mora ((rehefa maina), saika tsy misy tsiro, avy amin'ny collagen ao anaty biby "hoditra sy taolana.
• Izy io dia akora simika tena ilaina. Izy io dia matetika ampiasaina ho toy ny gelling agents.
• Araka ny antontan'isa tsy feno, ny indostrialy gelatin indostrialy dia misy fampiharana noho ny fahombiazany, amin'ny indostria mihoatra ny 40, karazana vokatra mihoatra ny 1000 no ampiharina.
• Izy io dia be mpampiasa amin'ny adhesive, jelly lakaoly, lalao, paintball, plating ranon-javatra, sary hosodoko, taratasy fasika, cosmetic, hazo adhesion, boky adhesion, dial sy landy efijery agents, sns.
Ny gelatin dia saika ampiasaina manerantany ho toy ny mpamatotra ny fifangaroan'ny simika simika ampiasaina hamoronana lohan'ny lalao. Ny fananana ambonin'ny gelatin dia manan-danja satria ny toetra mampiavaka ny lohan'ny lalao dia misy fiantraikany amin'ny fahombiazan'ny lalao amin'ny fandrehitra
Ny gelatin dia ampiasaina amin'ny haben'ny habe sy amin'ny taratasy firakotra. Na ampiasaina irery na miaraka amin'ny fitaovana fametahana adhesive hafa, ny fonosana gelatin dia mamorona faritra malama amin'ny famenoana ireo tsy fahalavorariana ambonimbony ka ahazoana antoka ny fanatsarana ny fanontana. Ohatra amin'izany ny afisy, ny karatra filalaovana, ny sary an-tsary ary ny pejin'ny magazina manjelanjelatra.
Ny gelatin dia ampiasaina ho fatorana eo anelanelan'ny akora taratasy sy ireo sombin-tsolika manimba. Mandritra ny fanamboarana, ny fametahana taratasy dia voaravaka vahaolana gelatin mifantoka aloha ary avy eo dia feno vovoka masiaka amin'ny haben'ny poti takiana. Kodiarana, kapila ary fehikibo mampivadi-po no voaomana toy izany koa. Ny fanamainana ny lafaoro sy ny fitsaboana amin'ny rohy dia mamarana ny fizotrany.
Nandritra ny am-polony taona lasa izay, ny adhesives miorina amin'ny gelatin dia nosoloina tsiranoka syntetika isan-karazany. Tato ho ato, na izany aza, ny biodegradability voajanahary ny gelatin adhesives dia tanteraka. Androany, ny gelatin dia ny safidy adhesive amin'ny famehezana ny boky an-tariby sy ny famehezana ny baoritra.
25kgs / kitapo, kitapo poly iray ao anatiny, kitapo misy tenona / kraft ivelany.
1) Miaraka amin'ny paleta: kaontenera 12 metric / 20 metatra, kaontenera 24 metric / 40 metatra
2) Tsy misy paleta:
ho an'ny 8-15 harato, 17 metric taonina / fito metatra, fito metatra 24 metatra / 40 metatra
Mesh 20 mahery, kaontenera 20 metric / 20 metatra, kaontenera 24 metric / 40 metatra
Fitehirizana ao amin'ny trano fanatobiana entana: voafehy tsara ny hamandoana ao anatin'ny 45% -65%, ny mari-pana ao anatin'ny 10-20 ℃
Ampidirina anaty kaontenera: Tazomy ao anaty fitoeram-bokatra mihidy mafy, voatahiry amina faritra mangatsiaka sy maina ary misy rivotra.